ရှမ်းရိုးရာအရသာစစ်စစ်ကိုခံစားရင်း ရှမ်းပြည်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေကို လွမ်းမောကြရအောင် – FoodiesNavi
အစားအစာအသစ်အဆန်းတွေနောက်ကို ဘယ်လိုပဲကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေပါစေ ?? ?? နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တိုင်း ခြေဦးပြန်လှည့်လာခဲ့မိတာကတော့ ?? ?? ရှမ်းရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေဆီကိုပါပဲ။ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် ရှမ်းရိုးရာအစားအစာတွေဟာ လူတိုင်းလိုလိုနဲ့ခံတွင်းတွေ့လှတယ်ထင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင် ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပေါများလွန်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကစားကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကို သဲကြီးမဲကြီးရှာဖွေနေတတ်တဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ Facebook မှာ သူများတွေ Check in တင်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုတောင် ဝင်စပ်စုတတ်တဲ့အထိပါပဲ။ ? ? ဟိုတစ်နေ့ကလည်း ဘဲကြီးတွေရဲ့အချစ်တော် လုလုအောင် Check in တင်ထားတဲ့ စိန်မူဆည်ဆိုတဲ့ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်လေးကို ကိုယ်ဝင်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားမိတာနဲ့သွားစားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်လေးကတော့ အပြင်ပန်းကကြည့်ရင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသလို ဆိုင်အတွင်းပိုင်းမှာလည်း လိမ္မော်ရောင်အုတ်နံရံတွေပေါ် မီးရောင်ဝါဝါလေးတွေဖြန့်ကျက်နေတာကြောင့် ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်မျက်စိပသာဒရှိလှပါတယ်။ ရှမ်းအိုးစည်လေးတွေချိတ်ဆွဲထားပြီး ကြိမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရှမ်းရိုးရာမီးဆိုင်းတွေကလည်း ရှမ်းရိုးအငွေ့အသက်တွေကို တစ်စတစ်စလွမ်းမောလာစေပါတယ်။ ညနေထိအောင် အိုက်စက်စက်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ နွေရာသီမှာ အဲကွန်းလေစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းရှိလှပါတယ်။
ကိုယ်မှာစားဖြစ်တာတွေထဲက မာလာဟင်းအရသာကတော့ ကိုယ့်နှလုံးသားကိုတော်တော်လေး ? ? ယောက်ယက်ခတ်သွားစေတယ်။ ဘယ်ရှမ်းဆိုင်မှာမှ မရခဲ့ဖူးတဲ့ရှိန်ရှိန်ထုံထုံအရသာလေးက တော်တော်ကိုထိမိလွန်းတယ်။ မာလာရှမ်းကောတွေမှာထည့်သုံးတဲ့ မာလာဟင်းအနှစ်တွေအရသာလိုမျိုး စပ်စပ်ထုံထုံလေးတွေက စိုဖတ်ဖတ်လေးတွေနဲ့ စားလို့ကိုမဝနိုင်ဘူး ။ ဝက်သား ၊ အပ်မှို ၊ ကြွက်နားရွက် ၊ မာလာဖတ်တွေနဲ့ အသီးအရွက်အစုံအလင်ကို မာလာအနှစ်အရသာစိမ့်ဝင်အောင် ချက်ပြုတ်ပေးထားပြီး ဝက်ခေါက်ကြော်တွေကိုပါ ညှပ်ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ ကိုယ်ကြွေမိတာအမှားလားနော်။ ? ? မာလာဟင်းအရည်ပျစ်ပျစ်လေးတွေမှာလည်း မညက်တညက်မြေပဲဆံလေးတွေ ရောနှောတာကြောင့် တရွှတ်ရွှတ်သောက်မိတိုင်းမှာ ဟင်းရည်တွေလည်ချောင်းထဲ စီးဝင်သွားတာနဲ့အတူ ကိုယ်ရဲ့အရသာအာရုံတွေလည်း လွင့်မျောလိုက်ပါသွားသလို ညှို့ချက်ပြင်းလွန်းလှတဲ့ မာလာဟင်းလေးပါ။ ? ?
ဝက်ဂုတ်သားကင်ကတော့ တော်တော်လေးနူးညံ့တယ်ပြောရမယ်။ အရမ်းဝါးနေစရာမလိုအောင် နူးညံ့အိစက်ချက်က ကမ်းကုန်ပဲ ။ အရသာမပေါ့မငံလေးနဲ့ ဆားပြားသင့်တယ်ပြောရမယ်။ တစ်သားတစ်မျှင်ချင်းစီကနေ အရသာဓာတ်တွေ စိမ့်ထွက်နေသလားထင်မှတ်ရလောက်အောင် အကင်နံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ တစ်ခုပဲ ဝက်ဂုတ်သားကင်နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ အချဉ်ရည်ကတော့ သိပ်မကောင်းလှဘူး ။ ကျဲတောက်တောက်ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့ဆိုတော့ ? ? ဝက်ဂုတ်သားကင်ရဲ့တို့စားရတာ သိပ်မလိုက်ဖက်လှဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ဝက်ဂုတ်သားကင်ကြီးပဲ အဝကြိတ်လာလိုက်တယ် ? ?
ဝက်သားလုံးဆေးခါးရွက်စွပ်ပြုတ်ကတော့ ရှမ်းရိုးရာဆေးဖက်ဝင် ဆေးခါးရွက်တွေကို ဝက်သားလုံးတွေထဲမှာ ထည့်လုံးထားသလို ဟင်းရည်ထဲမှာလည်း ထည့်ချက်ထားတာကြောင့် ဆေးခါးရွက်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကို အပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခါးရွက်ဆိုလို့ ခါးခါးကြီးတော့မထင်လိုက်နဲ့နော်။ လျှာပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဆိမ့်သက်သက်ချိုမြမြ အရသာလေးတွေသာပေါင်းစပ်ခံစားရပြီး အကြောပေါင်းတစ်ထောင် စိမ့်ထွက်သွားလောက်တဲ့အထိ ကိုယ်လိုအခါးကြောက်တဲ့လူကိုတောင် အပြည့်အဝဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဝက်သားလုံးတွေကို ကိုက်စားကြည့်လိုက်တော့လည်း နူးညံ့အိစက်နေပြီး ဆေးခါးရွက်နဲ့တော်တော်ကို လိုက်ဖက်ညီတယ်ပြောရမယ်။ သာမန်ဝက်သားလုံးရဲ့အရသာထဲကကွဲထွက်ပြီး တမူထူးခြားတဲ့ခါးသက်သက်အရသာလေးဟာ ဝါးစားပြီးတိုင်း လျှာနောက်ဖျားမှာစွဲကျန်နေခဲ့ပုံလေးက ပြောမပြတတ်အောင် ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။
တောင်ကြီးရှမ်းဟင်းထုပ်ကတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးနဲ့ ရှမ်းရိုးရာအရသာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရစေတယ်။ ဆန်မှုန့်ရဲ့စီးပိုင်ပိုင်အသားလေးတွေကြားထဲမှာ ကြက်သားဖတ်ကြီးကြီးတွေနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်လေးပါပေါင်းထည့်ထားတော့ ရှယ်ကိုခံတွင်းတွေ့သွားစေတယ်။ ဂျူးမြစ်လေးကို တဂျွတ်ဂျွတ်ကိုက်ပြီး တွဲဖက်စားလိုက်ရင်တော့ ရှမ်းပြည်သွားစားနေသလို ရှမ်းဟင်းထုပ်အရသာက လုံးဝကွက်တိပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ဝက်သားလုံးဆေးခါးရွက်စွပ်ပြုတ်လေးတစ်ဇွန်းသောက်လိုက် ဟင်းထုပ်လေးတစ်လုပ်စားလိုက်နဲ့ ခံတွင်းတွေ့နေရောပဲ။ ? ?
ပြောင်ဖူးထောင်းကတော့ သံပုရာရည်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ တော်တော်လေးခံတွင်းရှင်းပါတယ်။ ပြောင်းဖူးရဲ့ချိုချိုမြမြအရသာတွေ ပျောက်မသွားဘဲ ချဉ်ငံစပ်လေးထောင်းထားတော့ ချိုချဉ်ငံစပ်အရသာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းခံစားရရှိစေပါတယ်။ ရောထည့်ထောင်းထားတဲ့ အသီးအရွက်တွေကလည်း လတ်ဆတ်နေသလို စိမ့်ထွက်နေတဲ့အရည်လေးတွေကလည်း အရသာအစပ်အဟပ်တည့်လှတော့ ကိုယ်ဆိုတစ်ပန်းကန်လုံးကုန်တဲ့အပြင် အရည်တွေအကုန်လုံးပါ ဇွန်းနဲ့ခပ်သောက်ခဲ့သေးတယ် ? ?
ရှမ်းဆိုင်ဖြစ်တာကြောင့်လားတော့မသိ ဆန်စီးခေါက်ဆွဲကတော့ စွန်းဖိုင်းတယ်။ ရှမ်းပြည်မှာသွားစားရတဲ့ အရသာတွေအတိုင်းကို ကွက်တိကျလွန်းလို့ စိတ်ထဲမှာ5stars ကိုတန်းပေးမိတော့တာပဲ ။ တမြေ့မြေ့စားလေ တစိမ့်စိမ့်အရသာတွေ့လေပဲ။ ဆိုင်ကိုဝင်လာတဲ့လူတိုင်းလည်း ဆန်စီးကိုမပါမဖြစ်မှာနေတာတွေ့ရတယ်။ ဆန်စီးခေါက်ဆွဲရဲ့ ပြင်ဆင်ထားပုံလေးကိုက မြင်ရုံနဲ့တင် သွားရည်ကျစရာကောင်းနေတယ်။
ယိုးဒယားကွေ့တီယိုသုပ် -ဒါလေးလည်းမဆိုးဘူး ? ? ကွေ့တီယိုဖတ်လေးတွေက နူးအိအိလေးနဲ့ အရသာပေါင်းစပ်ထားမှုတွေကလည်း အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိကျတယ် ။ တစ်ပန်းကန်လုံးထဲမှာ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးကတော့ ဝက်သားလုံးပဲ။ အသားလေးကထုံထုံရှရှလေးနဲ့ ဝါးကြည့်လေထပ်စားချင်လေပဲ။ အသုပ်ဆိုပေမယ့် နည်းနည်းခြောက်ကပ်နေတာတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ။ နှံ့အောင်မနည်းနယ်ရတယ်။ ကိုယ်ကတော့ စိုစိုလေးဖြစ်နေရင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဖျော်ရည်ဖျော်တဲ့လူက တော်တော်စေတနာပါပုံရတယ်။ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ကလေးနဲ့ အိမ်မှာဖျော်သောက်ရသလိုပဲ။ အချိုတွေလည်းအရမ်းမထည့်ထားဘဲ သဘာဝအသီးအရသာ စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်လွင်အောင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးဖျော်ထားတာကြောင့် သောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ လည်ချောင်းကနေ အစာအိမ်ထဲအထိ တစ်လျှောက်လုံးကိုအေးစိမ့်သွားတာပဲ။
စျေးနှုန်းတွေကလည်း တော်တော်လေးကို သက်သာတယ်။ Menu မှာသာကြည့်လိုက်ပါတော့ ။ ပုံမှန်စျေးနှုန်းလေးတွေပေးပြီး အရသာထူးခြားတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က ကိုယ်စားဖူးသမျှရှမ်းဆိုင်တွေထဲမှာ ဒီဆိုင်လေးကိုကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပဲ။
နေရာကလည်း စံပြရုပ်ရှင်ရုံနားက သွားလာရလွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ လမ်းမတော်(၁၂)လမ်းအဝင်နားလေးမှာပဲဆိုတော့ သိပ်ရှာနေစရာမလိုဘူးနော်။ လိပ်စာအပြည့်အစုံကတော့ အမှတ်(၉၀) ၊ (၁၂)လမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၉)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ဝင်ကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်က Link လေးထဲမှာ ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။
Sein Muse Facebook